I-PaveAI: Omunye Ekugcineni Uthole Izimpendulo ku-Google Analytics! | Martech Zone
NgoMsombuluko, Februwari 27, 2017 NgoMsombuluko, Februwari 27, 2017 Douglas Karr
Sekuyiminyaka silwa namakhasimende womabili nabachwepheshe benza izinqumo ezingezinhle ngokususelwa ku- analytics. Kukhona ukushiyeka okuningana, ikakhulukazi nge -Google Analytics, ukuthi abantu kaningi abazi nge:
Traffic Inkohliso - analytics traffic akubandakanyi ukuvakashelwa okwenziwe ama-bots. Inkinga ukuthi kunezigidi zama-bots laphaya ezifihla ubunikazi bazo njenge-bot. Bavakashela kanye umzuzwana, bakhuphule amazinga akho okunciphisa futhi banciphise isikhathi sakho esizeni. Ngaphandle kokuyihlunga kahle, ungenza izinqumo ezingezinhle.
I-Ghost Traffic / Ukudluliselwa Kogaxekile - kukhona izilima lapho ezonakalisa i-your analytics pixel bese ushayela ithrafikhi yakho ibonisa ukuthi yisayithi lokudlulisela kwelakho. Awukwazi ngisho nokuwavimba ngoba awavakasheli indawo yakho nhlobo! Futhi, ukungazihlungi lezo zivakashi ezivela kuwe kungathinta izinqumo zakho.
Ithrafikhi Engaziwa - kuthiwani ngezivakashi eza endaweni yakho ngamabomu, kepha zashiya ngoba bezifuna okunye? Sibe neklayenti kanye elibeka phezulu kakhulu kunekhodi yokushayela yesiteshi somsakazo wendawo. Njalo uma kunomqhudelwano emsakazweni, izimoto zabo zazisakazeka. Silisusile ikhasi futhi sacela ukuthi lisuswe ezinjinini zokusesha - kodwa hhayi ngaphambi kokuba lidale umonakalo eqenjini lezokumaketha lapho elingalitholanga.
Ngakho-ke uyihlunga kanjani futhi uyihlukanise analytics idatha phansi kusigaba esisebenzisekayo, esivumelekile ngokwezibalo esikuvumela ukuthi uhlaziye ngokunembile ukusebenza kwezivakashi?
I-PaveAI: Imininingwane Yokuhlaziya Okuzenzakalelayo
Siyakwamukela, I-PaveAI. I-PaveAI ikuvumela ukuthi uhlanganise i-Google Analytics, i-Google Search Console, i-Google Adwords, i-Facebook Ads, i-Instagram Ads (nge-Facebook Business Manager) kanye ne-Twitter Ads. Ipulatifomu yabo bese isebenzisa i-algorithm ye-AI kanye nezihlukanisi ezahlukahlukene zezibalo ngokuya ngemininingwane yakho yokumaketha ukuthola yonke idatha oyidingayo ukwenza izinqumo eziqinile. Imibiko ize inikeze nezingxenye namathuba azo okuba ngumholi noma obhalisile.
Sasampula amasistimu ambalwa aguqula iGoogle Analytics esiNgisini sanamuhla futhi akhombisa imibiko emihle kakhulu. Futhi sixoxe ngathoni yamathuluzi edeshibhodi ngaphandle lapho… kepha awekho lawo ebenikeza amaklayenti ethu ukubuka konke abakudingayo noma ukusinikeza ukuqonda esikudingayo ukwenza ushintsho. I-PaveAI yenza kokubili! Iqiniso lokuthi bazophinda babike ngefayela lakho le- analytics imigomo nesikhathi sesikhathi nakho kubalulekile. Nayi ifayili le- umbiko oyisampula:
PaveAI Isampula Report - Lead Generation
I-PaveAI isivele icubungula idatha yezivakashi ezingaphezu kwezigidi ezingama-400 njalo ngenyanga. Basusa ugaxekile wokuthumela ngokuzenzakalela futhi baletha nedatha yakho yokubhaliselwe yezindaba.
I-PaveAI: Izinzuzo Nezimo Zokusebenzisa
Ekulinganisweni kwabo, I-PaveAI isize amakhasimende ukuzuza i- ukwanda okuphakathi kwama-37% esizukulwaneni sokuhola noma imali engenayo ngemuva kwezinyanga ezintathu, kanye nesilinganiso Ukugcinwa kwe-2x kuma-ejensi isikhathi esingaphezu konyaka. Ukungasho isikhathi abasiza ngaso abathengisi ukuthi bonge ekuhlaziyeni nasekuhlanganiseni imibiko evela ezinhlelweni ezingafani.
Bhalisela isivivinyo samahhala sezinsuku eziyi-14 se-PaveAI
Amanani entengo athengeka ngokunika inani ledatha enikeziwe. I-PaveAI futhi inamalayisense ebhizinisi, ilayisense ye-ejensi, nokubhalwa kwemhlophe okutholakalayo.
Tags: aiAma-Analyticsukuhlakanipha okungekhona okwangempelaama-imeyili analyticsI-google analyticsukuhola isizukulwanei-paveaiukuqagelai-analytics yokubikezelaAmathuba
IVision6 ihlanganisa i-Eventbrite yezimemo nokuphathwa kohlu lwezivakashi